Ukubonakala kunye nokuba kwiimarike enye-ngokukodwa ngokukhawuleza?
Ukubonakala kwakhe kunye nembonakalo kwimarike enye
Ndiqhuba njani ngokuchanekileyo?
Inani leenombolo zingaphezulu namhlanje. Omnye unxunguphalo olusemva, elinye mhlawumbi ibango eliphezulu. Abaninzi banokungaboni ngesoloko okanye bengabi nantoni kunzima ukuhlangana nomntu. Amagama angabonakaliyo athile azama iindlela zanamhlanje zokuqhagamshelana nge-intanethi. Iindawo zokuthandana kwi-intanethi ziyaziwayo kunanini ngaphambili.
Flirt kanye kanye ngoku
Kwaba ngaphambili bekhangela "kwisiqingatha sesibini 'yakhe kakhulu nzima kakhulu kwaye ebomini ngokuqhelekileyo zivalelwe emsebenzini okanye abahlobo, ngoko iye namhlanje Bulelani kwi Internet ngeendlela ezahlukeneyo. Nditsho lo mfana shy ndisoyika, kodwa ingqondo sele oko bakhe - ifumaneka isikakhulu ukuzidambisa -Dulcinea.
Kuba kubathengi 55 + yaye ezi Webhsayithi konke konke abantu Shy okanye sixakekile ezifana abaphathi, abaziqeshileyo, leyo kuthatha ixesha elincinane okanye utyekelo ukuphuma, bethembisa amathuba amatsha kwavula ngenxa kwiinkonzo Internet. Yeyiphi sprightly iminyaka 60 iintetho sele unayo lady endlwini ikofu ukuze? Ndiyabulela kwi-intanethi, nokuba i-reverse inokwenzeka. Kwixesha elide ngoku, umfazi akakasadingeki ukuba adibane, kodwa uvumelekile ukuba athathe isinyathelo.
Ubomi bokwenene, amathuba okuba umongikazi, umzekelo, udibana kwaye uyamthanda umntu ofundiswe kakuhle, kodwa ongabonakaliyo onomdla ofanayo, uphelele ngokufanelekileyo. Intanethi yenza ukuba kwenzeke!
ukufuna ke kunzima ukuba iqabane ekunene ngaphandle Internet ayesebenzisa ukuba elula ngoko ke, ngelishwa, ukuqhuba namhlanje kunye iiprofayili abangatshatanga kunye evakalala yaye besilela ngokunyaniseka efuna singles.
Abanye abantu bavame ukudibanisa amasayithi okuthandana kunye nekharityhulam yokuthumela i-mail kwaye bacinge ukuba bafanele "bayilungise" umfazi. Iiprofayili, uyalwa sasijonge isiqulatho zabo kunye neemfuno kwi nqwelo ubusuku, Sexbeziehung kunye ukukrexeza, ikhula. Ekubeni namhlanje phantse wonke umntu unokufikelela kwi-intanethi, izinga leeprofayili liyancipha, abanye abafazi abangatshatileyo bathi. Nokuba uthandana iinkonzo, nekufuneka ehlawulwa ngokusetyenziswa kweenkonzo, inqanaba lehla kwaye inani abo babhalise ngokuyimfihlo ngaphandle photo evukile zehle kakhulu.
Ubhaliso obuninzi kunye neeprofayili ezonwabileyo kunye neengxelo ezingathandekiyo eziqulethwe ngumxholo othi: "Andiyi kufuna. Ndijonge nje "zifana nokungafani. Ngaphandle koko, nangona amanqanaba awela kunye neefake ezininzi, inani labafowunelwa kunye nokukwazi abantu abaninzi abahlukeneyo mhlawumbi ephakamileyo apha. Umntu ojongene nenyameko uhlala ejonga iminwe apha.
Ukunyamezela, kodwa kunokuthabatha ixesha kunye neziza zokuthandana!
Abantu abasandul 'udla ngokuqhelekileyo baxineke ngeencwadi kunye nohambo lwephepha. Ababini banokuzifumana kuphela kwibanga ngalinye elinesibini kunye neefowuni ezimbalwa zokwalamano oluhlala ixesha elide, oku mhlawumbi kuluhlu oludumileyo kumgaqo.
Iqela lobudala kunzima ukumela 36- ku 45 iminyaka abangenawo, ingekuko kuphela kubomi lokwenyani. Kodwa ngaba isasetyenziswa kunokwenzeka ngokuqhelekileyo yayanyaniswe usapho trust kwaye zanikwa okanye hayi, unangoku anikabi nako ukulungiselela umjikelo wesibini.
Yintoni oyenzayo xa umhlobo ogqwesileyo ethanda?
Ukufuna uphando olunzulu kufuneka ucacise ngeengcinga zakho kunye nezifiso. Nangona kunjalo, umntu kufuneka alindele ukudibana nabantu abangakagqiba ibali labo elidala. Ngokukhawuleza umntu uyazi ukuba "i-stopgaper".
Iimarike ezingabodwa kwi-intanethi
Ukongezelela, umntu kufuneka alungiselele ukuba u-Adonis othiwa ngowokuqala nomfanekiso esithombeni sakhe ufana nje.
Nangona kunjalo, nangona bengaziwayo, umntu kufuneka ahlale ephatha omnye ngesithunzi nangenhlonipho.
Eyona nto ikhohlisiweyo ibaluleke ngokukodwa kwisisindo kunye nobudala. Ukongezelela, amadoda anengxaki yokuvuma iincwele zazo. Abasetyhini bafana nokukopela nge-kilos zabo. Ngoko ke ngokuqhelekileyo kwenzeka ukuba akuyiyo yinyani, ngokuqhelekileyo sele ikhona iifoto ze-10 ezindala zatshintshana.
Ukuphazamiseka komhla wokuqala kukungenakwenzeka.
Ubomi akusikho ikhonkethi yokucela, ayikhoyo okanye i-intanethi. Ukuba umntu uyayiqonda le kwaye isebenzisa ubuchule zobungangamela incoko, exchange kwaye ukwazi ngamnye ukuba inani singles imali eninzi kunye zenzeke, i ntsako kunokwenzeka kunye eninzi self-amava nto endleleni.
Mhlawumbi kufanele ube nesigulane.
Ukuba ngumzali - isibini esithandanayo ubambiswano
Ukuphuka kwimpilo yemihla ngemihla i-tab?
Ziziphi iipolitiki - Kutheni ukhethe enye ...
Indoda encinci imile kwimithi - amanqaku kunye neetekisi
Inyoni yayifuna ukwenza umtshato - amanqaku kunye neetekisi
Emthini i-cuckoo ehleli phantsi kunye neetekisi
Yintoni imbongo ... Iincwadi zokufunda iincwadi
Indlela yokupenda i-unicorn
Ibali elifutshane kubantwana - Isilwanyana nje ...
Umtshato - Yiyo ndlela umcimbi womtshato uba yimpumelelo